Mayelana NATHI - Guangzhou Chengfeng Mfowethu Industrial Co., Ltd.
I-Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited
uhambo lokuhamba ngomkhumbi, ubumbano nenqubekela phambili, ukulunga nokuzuza ndawonye, ​​ukuthatha imithwalo yemfanelo!
i-glassware yethu inegalelo ekuhlanzekeni nasekuphileni okuhlanzekile!
ikhwalithi, ukusebenza kahle, inani, ubuntu
Isingeniso Indaba Yenkampani
Leli gama lomkhiqizo liyinhlanganisela yamagama wabasunguli benkampani ababili u-CHENG no-FENG abazalwa ngokuzalwa. I-logo ihlanganisa amagama abo okuqala futhi iphathelwe kufomu levemvane. Incazelo eshiwo yalolu logo 'ukundiza ngamaphiko amabili anamandla, hlanganani futhi niqonde phezulu ukufeza iphupho'. Izimvemvane ziyahlangana phakathi kwesibungu ziye kokuhlukahluka okumibalabala kobujamo, kusuka ezimvemvane ezizalisayo isibungu, kusuka kusibungu sokufanisela kube izimvemvane, umjikelezo wempilo uyaqhubeka. Lokhu kukhombisa ukuthi ibhizinisi lethu liyakhula lisuka kokuncane liye kwelikhulu, isinyathelo ngasinye sisungula, siguqule futhi sifanise izizukulwane ngezizukulwane, futhi sikhula ngendlela esimeme.
Lo mklamo we-LOGO uqhamuka egameni elihlangene lendebe yengilazi ne-whisky, lisetshenziswa ku-whiskey cup cup series origination brand. Uhlamvu 'G' lwenzelwe ukufana nokubuka komdwebo wencwadi yokuqala kanye nenkomishi ye-hexagon whiskey. Kamuva ngenxa yokwanda kwesidingo semakethe, manje iyasetshenziswa kepha ayikhawulelwanga kumalebula azimele ezinkomishi zekhofi, izingilazi zewayini elibomvu, izingilazi zobisi nezinye izimpahla zansuku zonke zezinkomishi zengilazi. Lokhu kuthengiswa kakhulu futhi kuthengiswa ngamapulatifomu e-E-commerce aku-inthanethi.